Amasevisi - Yancheng Lianggong Formwork Co.,Ltd.
Ungaxhumana nathi ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana ne-Lianggong Formwork bese ukhetha ukuthi yiluphi uhlelo lwe-Formwork olufaneleka kakhulu.
Onjiniyela baseLianggong bonke banesipiliyoni seminyaka, ngakho-ke singakwazi ukuhlola izidingo zakho zobuchwepheshe, isabelomali kanye nohlelo lwesayithi konke ndawonye ukuze siphume nesiphakamiso sochwepheshe.Futhi ekugcineni, ikusiza ukuthi ugxile ohlelweni olulungile lokuhlela lobuchwepheshe.
Ochwepheshe bethu bangaklama imidwebo ehambisanayo ye-Auto-CAD, engasiza abasebenzi besayithi lakho ukuthi bazi izindlela ezisetshenziswayo nemisebenzi ye-formwork & scaffolding system.
I-Lianggong Formwork ingahlinzeka ngezixazululo ezifanele zamaphrojekthi ahlukene ngokuhlela okuhlukahlukene kanye nezidingo.
Sizolungisa imidwebo yokuqala kanye nezingcaphuno ezinsukwini ezimbalwa ezizayo lapho sithola i-imeyili yakho ehlanganisa imidwebo yesakhiwo.
I-Lianggong izolungiselela yonke imidwebo yezitolo kanye nomdwebo womhlangano oya kukhasimende lethu ngaphambi kokuba imikhiqizo ye-Lianggong ifike esizeni.
Ikhasimende lingasebenzisa imikhiqizo yethu ngokusho komdwebo.Kulula futhi kusebenza kahle kakhulu.
Uma ungumqali we-Lianggong formwork & scaffolding system noma ufuna ukusebenza okungcono kwesistimu yethu, singahlela nomphathi ukuthi anikeze usizo lochwepheshe, ukuqeqeshwa kanye nokuhlolwa esizeni.
I-Lianggong ineqembu elichwepheshile labathengisi lokuvuselela i-oda nokugcwaliseka, kusukela ekukhiqizeni kuya ekulethweni.Ngesikhathi sokukhiqiza, sizokwabelana ngohlelo lokwenziwa kanye nenqubo ye-QC nezithombe namavidiyo ahambisanayo.Ngemva kokuphothulwa kokukhiqiza, sizophinda sidubule iphakheji futhi sililayishe njengerekhodi, bese silithumela kumakhasimende ethu ukuze lizikhombe.
Zonke izinto ze-Lianggong zipakishwe ngokufanele ngokusekelwe kusayizi nesisindo sazo, ezingahlangabezana nemfuneko yokuthutha olwandle kanye ne-Incoterms 2010 njengesibopho.Izixazululo zephakheji ezihlukene zenzelwe kahle izinto zokwakha nezinhlelo ezahlukene.
Iseluleko sokuthumela sizothunyelwa kuwe nge-imeyili umthengisi wethu nalo lonke ulwazi olubalulekile lokuthumela.okuhlanganisa igama lomkhumbi, inombolo yesiqukathi kanye ne-ETA njll. Isethi ephelele yamadokhumenti okuthumela izothunyelwa kuwe noma ikhishwe nge-Tele uma uyicela.